जीवनमन्त्र - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
मुटु रोगीले नियमीत खाऔँ बदाम ,बदामका १० फाईदा
बदाम ड्राई फ्रूट अन्तर्गत पर्छ । बदाम स्वास्थ्यका लागि निकै फलदायी हुन्छ । यसले तागत दिनुका साथै दिमागको विकास पनि गराउँछ । बदाम खाने मात्र हैन, यसको तेल पनि प्रयोग गर्..
यी हुन् पुरुषलाई बेफाईदा हुने खानेकुराहरु ,तर यी कुराले भने दिन्छन् धेरै फाईदा
प्राकृतिक रुपमा पुरुषको बनावट महिला भन्दा बेग्लै हुन्छ । खान पिनको कुरामा केहीं फूड पुरुषको लागी हानिकारक हुन्छन् । यसले हार्मोनल समस्या, विभिन्न कमजोरी र अन्य बिमारी ल..
तपाईँलाई थाहा छ , मेकअपका यी सामानले गर्ने असर ?
दिन प्रतिदिन सौन्दर्य प्रति महिलाहरुको चासो बढ्दै गइरहेको छ । धेरै सौन्दर्य सामाग्रीकै प्रयोगले प्राकृतिक सौन्दर्य गुमाउने को संख्याहरु पनि प्रसस्तै छ । असर तत्काल नदेि..
तताएर खान नहुने खानेकुराहरु
खानेकुरा तातो खाए ज्यानलाई फाइदा गर्छ भन्ने हामी सोच्छौं । कसैलाई चिसो खानेकुराले स्वाद नै दिंदैन । त्यसैले चिसो खानुभन्दा तताएर खाऔं भन्ने हुन्छ । तर कहिलेकाही खानेकुर..
सुन्दर मुहारका लागि मेवा
मेवाले हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै फाइदा पुर्याउँछ । हामीले मेवालाई छालासँग सम्बन्धित समस्या हटाउनका निम्ति पनि प्रयोग गर्न सक्छौं । १. सौन्दर्यको समस्याको उपचार मेवा हाम्र..
सौन्दर्य बढाउने ८ टिप्स
आफ्नो रुप निखारनका लागि हामी के के मात्र गर्दैनौ । हामी विभिन्न किसिमको क्रिमहरु प्रयोग गर्छौ । तर, त्यसले फेसमा हानी गर्न पनि सक्छ । कसैलाई कुनै क्रिम नफापेर एलर्जी पन..
शिवको पूजा गर्दा के चढाउने र के नचढाउने ?
श्रावण महिना शिवको आराधना हुने महिनाहो । यो महिनामा शिवको पूजा गरे भने सबै दुख मर्मबाट मुक्ति मिल्छ भनिन्छ । शिवको पूजागर्ने समयमा केहि नियमहरुको पालना गर्नुपर्छ । खासगरि शिवलिङ्गमा चढाउन हुने र नहुने कुराहरुमा हामीले ध्यान पुर्याउन आवश्यक हुन्छ । आज हामी शिवलिङगमा चढाउन हुने र नहुने कुराहरुको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । १ तुलसी [&h..
खाना र फिटनेस टिप्स दिदैँ रमेश उप्रेती
स्वास्थ्यबारे साह्रै सचेत अभिनेता रमेश उप्रेतीसँग आज हामीले, उनको खाना र फिटनेसबारे कुराकानी गरेका छौँ । सबैभन्दा पहिे स्वास्थ्यका बारेमा के भन्छन् रमेश पढ्नुहोस् उनकै शब्दमा । “मान्छेले के भन्छन भने खाना नखादैमा मान्छे सिलिम र स्वस्थ्य हुन्छ । तर यो सरासर गलत हो । हाम्रो शरीरलाई प्रपोर न्युट्रिस्न चहिन्छ । त्यसलै हाम्रो स..
किरण केसीको रेसीपी –खसीको मासु कसरी स्वादिलो बनाउने ?
म किरण केसी । आज म तपाईँहरुलाई २ किलो खसीको मासु पकाउन सिकाउँछु । तपाईं चाहि आफ्नो आवश्यकता अनुसार पकाउनु होला । सामान पनि त्यहि अनुसार अडकल्नु होला । -प्याज काट्नुस् । जीरा, मरिच, ल्वाङ, सुक्मेल, खुर्सानी, लसुन, अदुवा मज्जाले पिस्नुस् । टमाटर काटेर रेडि गर्नुहोस् । -अब पाँच किलोको प्रेशर कुकर निकाल्नुहोस् । कुकर […]
कपाल टुक्रीएर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस यी १० उपाय
कपाल टुक्रीने समस्या सबैको साझा समस्या हो । बजारमा आएका विभिन्न तेल,स्याम्पु ,कन्डीसनरको प्रयोगले गर्दा हाम्रो कपाल झर्ने , टुट्ने लगायतका समस्याहरु देखा पर्छन् । आज हामी तपाईँलाई कपाल टुक्रीनबाट कसरी बच्ने ? त्यस बारेमा जानकारी दिदैछौँ । यदि तपाईले यी १० उपाय अपनाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँको कपाल केहि हदसम्म टुक्रीन बन्द हुनेछ..
साउन महिनामा यी ८ चिज घरमा राखे, हर काममा दुई गुणा फाइदा पाईन्छ
साउन महिनामा भगवान् शिवको आरधाना हुन्छ । यो दिनको बिचमा शिवको आरधाना गर्नले धेरै लाभ मिल्छ। भगवान् शिवको यी ८ सामाग्रीहरु साउन महिनामा घरमा राखेमा विशेष फाइदा पाइन्छ– १ रुद्राक्ष रुद्राक्ष को उत्पति भगवान शिवको आँशुबाट भएको हो । यसलाई घरको मूल सदस्यको कम्मरमा लगायो भने लाभ हुन्छ । २ खरानी खरानी भगवान शिवको प्रिय वस्तु [&helli..
दिमाग तेज बनाउने १२ पेय पदार्थ
दिमागको पावर बढाउनको खानासँगै पेय पदार्थ पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । नियमित फलफूलको जुस खाएमा स्मरण शक्ति तेज हुन्छ । पेय पदार्थ वा भनौं जुसमा हुने एन्टी–अक्सिडेन्ट्स र अन्य तत्वले ब्रेनाको विकास गर्छ र स्मरण शक्ति बढाउन सहयोग गर्छ । आज हामी १२ पिय पदार्थहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ जसको नियमित प्रयोगले बलबालिकादेखि बुढ्यौली उमेरस..
केकीले यसरी घटाईन् पाँच किलो तौल , तपाईँ पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ उनको फिटनेस टिप्स
अहिले केकी अधिकारी निकै स्लिम हुनु भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ कसरी घटाउनु भयो तौल ? केहि समय अघि म अमेरिकाको बसाईबाट आउँदा निकै मोटाएकी थिएँ । त्यस समय मैलै फिटनेस सेन्टर जान पनि भ्याको थिईन् । अमेरिकाबाट आउादा म ५५ किलो पुगेकी थिएँ । एक दिन शो हुन्थ्यो । अरु दिन सधै बस्ने […]
कमजोर हुनुभएको छ ? यी हुनसक्छन् कारण
शरीरमा नुनको मात्रा सन्तुलित राख्नको लागि पोटासियमको आवश्यकता पर्छ । शरीरमा पोटासियमको कमी भएमा स्वास्थयमा धेरै थरि समस्या देखापर्न थाल्छन् । हामी एकदमै कमजोर हुन्छौँ । भारतीय डाईजेशियन अमिता सिंहका अनुसार शरीरमा पोटासियमको कमी हुँदा देखापर्ने समस्याहरु तल उल्लेख छन्ः कमजोर हुनु पेटासियमको कमीले शरिरमा एसिडको मात्रा बढ्छ । यसले ..